Home Siyaasadda Wajiyaal isku faraxsaneyn ayaa ku kulmi doonno Caleemma saarka Madaxweynaha.
Sedaxddii sanno ee lasoo dhaafay xaaladda Gobolka meysan aheyn mid wanaagsaneed waxaanna jirray kalla shiki weyn iyo in laggu kalla aar goosto siyaasadda waxaanna Gobolka ka billowday iskaashigiii sedax geesoodka ahaa kaas oo Somalia u horseedday inneey yeelato cadow farra baddan iyo Siyaasaddii oo xarka goosatay illaa hadda isku cakiran .
Maalinta berito ah waa maalintii loo asteeyay caleemma saarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia Hassan Sheikh Mohamud waxaanna ka soo qeyb gelli doonno hogaamiyaal sedax sanno is diidanaa kalla arragti ahaa dhibaato weyne dhax tiillay mid dhaqaalle iyo mid siyaasadeed
hogaamiyaha uggu sameynta baddan ee berito immaan doonno waa Uhura kenyatta Madaxweynaha Dalka kenya oo ahaa mid aad iyo aad Ulla dagaalsanaa madaxweyne hore Farmaajo wanna kullan lawadda sugaa oo xiiso gaar ah leh waxaanna tibin doonno muqaal baahiyaal caallami ah waxaanna aad loowadda sugaayaa qudbadda Uhura kenyatta.
Madaxweyne Cisma’iil Osmar Galle oo asigane aad isku haayeen hogaankii hore ee Dalka ayaa asigane immaan doonno calleema saarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somalia Hassan Sheikh Mohamud madaxweyne Geelle berito waxaay u tahay maalin taariikhi ah uunna rajeynaay innuu arko Farmaajo oo xaalka ku xunyahay Somalia-ne madaxweyne uusan ka aheyn .
Madaxweyne Abiya Ahmed oo ahaa maskaxdii maamuli jirtay Madaxweyne hore Farmaajo ayaa immaan doonno asigoo aad u niyad jabsan saaxibkiisna bannaanka uu ka yahay hishiiskii sedax geesodka ahaa oo aay ku hishiiyeen maann aha maalin uu ku farxi doonno.
Siyaasadda Gobolka oo ku soo laaban doonto siddii horre waa guusha Somalia
Previous articleMiiska Waan Fadhinaa Balse Waxtar ma lihin miyaa?
Next articleDENI IYO XAMAR:Shalay oo uu musharrax ahaa iyo maanta oo uu soo laabtay i
DAAWO:- MUQAAL” DEG DEG Saxiixii 2aad oo Liverpool ayqaadaneyso, Barce &...